Turkiga oo ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Maraykanka u dhaxaysa | Berberanews.com
Home WARARKA Turkiga oo ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee Maraykanka u dhaxaysa
ANKARA —(Berberanews)-Danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin, Ankara-na ay dooneysaa in la wanaajiyo iskaashiga ka dhexeeya Washington, sidaasi waxaa Sabtidii sheegay Madaxweynaha Turkey, Recep Tayyip Erdogan, kani oo ah dhawaaq naadir ah oo db u heshiisiineed.
Xidhiidhka u dhexeeya labadan dal ee ka wada tirsan isbahaysiga NATO ayaa waxaa madmadow geliyay arrimo badan. Bishii December, Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku saaray Turkey iibsiga nidaamka difaaca Ruushku sameeyay ee S-400, halka Ankara ay ka carootay taageerada Mareykanka ee maleeshiyada Kurdiyiinta YPG ee Suuriya, oo ay u aqoonsan tahay urur argagixiso ah.
Turkey oo sheegay in uu doonayo hagaajinta xidhiidhka Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu yeedhay Washington in ay joojiso taageerada ay siiso malayshiyaadka YPG oo ay ku eedeeysay in ay la safan tahay mintidiin ay sheegtay in bishan ay 13 ruux oo Turki ah ku dileen waqooyiga Ciraaq, halka Mareykanka uu ku dhaleeceeyay Ankara sida ay umaareyso xuquuqda iyo xorriyadaha.
Previous articleShuruudaha lagu xidhay murashaxiinta cusub ee u tartamaya Gole-yaasha Deegaanka iyo Wakiilada Somaliland
Next article“Weli UDUB baan daydayayaa” Wasiir Siciid Sulub